China Carbon nkenke ígwè tube Imepụta na Factory |Ọla Ọdịnihu
Uru nke mmepụta tube nkenke:
1. N'ime na n'èzí Dayameta na / ma ọ bụ mgbidi ọkpụrụkpụ nke oke akụkụ ziri ezi
2. Ebe a na-esepụta nke ọma
3. Na-abawanye ihe ndị na-adịghị ike n'ihi ọrụ oyi
4. Ọnụ ọgụgụ buru ibu
5. N'ime afọ 30 ahụmahụ banyere alloy ọkpọkọ, carbon ígwè anwụrụ, enweghị nkebi tube, nkenke tube.
6. Anyị nwere ụlọ ọrụ mmepụta ihe na ụlọ nkwakọba ihe, na ngwaahịa, na uru na ọnụahịa na oge nnyefe
7. Pụrụ iche mbupụ otu ， zuru okè àgwà mmesi obi ike na mgbe-sales ọrụ
Enwere ike ịme ọkpọkọ nkenke site na carbon, alloy ma ọ bụ igwe anaghị agba nchara nwere nha dị elu, na-emepụta site na mpịakọta ọkụ ma ọ bụ oyi na-atụ (oyi mpịakọta) usoro.Ọ na-ejikarị na-emepụta akụkụ igwe na nhazi nhazi.
Carbon nkenke ígwè anwụrụ nkọwapụta:
Akụkụ 8-553.8 mm (1/2 inch ~ 22 inch)
Nha akpa 20ft GP: 5898mm ( Ogologo) x2352mm (obosara) x2393mm (Elu)
40ft GP: 12032mm ( Ogologo) x2352mm (obosara) x2393mm (Elu)
40ft HC: 12032mm ( Ogologo) x2352mm (obosara) x2698mm (Elu)
Nkọwa ngwaahịa Tube nkenke
Kedu ihe kpatara ịhọrọ tube nkenke carbon anyị?
Dị ka a na-eduga ígwè ọkpọkọ / tube (nkenke tube, carbon ígwè tube, igwe anaghị agba nchara, enweghị nkebi anwụrụ, welded ọkpọkọ, nkenke tube, wdg) emeputa na China, anyị nwere zuru ezu mmepụta akara na a kwụsiri ike ọkọnọ ike.Ịhọrọ anyị ga-enye gị ohere ịchekwa oge na ọnụ ahịa ma nweta uru kachasị elu!
Ọkachamara China Steel Tube Supplier:
Ụlọ ọrụ anyị nwere30 afọ nke mmepụta na mbupụ ahụmahụ, mbupụ na ihe karịrị 50 mba na mpaghara, dị ka United States, Canada, Brazil, Chile, Netherlands, Tunisia, Kenya, Turkey, United Arab Emirates, Vietnam na mba ndị ọzọ.N'iji ọnụ ahịa ikike mmepụta ihe edozi kwa ọnwa, ọ nwere ike izute nnukwu iwu mmepụta nke ndị ahịa. Ugbu a, e nwere ọtụtụ narị ndị ahịa nwere nnukwu ọnụ ahịa iwu kwa afọ. Ọ bụrụ na ị na-achọ efere ígwè, eriri igwe, ọkpọkọ ígwè na ngwaahịa ígwè ndị ọzọ, kpọtụrụ anyị iji nye gị ọrụ ọkachamara kachasị, chekwaa oge na ọnụ ahịa gị!
Ụlọ ọrụ anyị na-akpọkwa ndị ọrụ mpaghara na mba dị iche iche.Enwere ihe karịrị efere igwe 60 pụrụ iche, eriri igwe na ndị na-ahụ maka ọkpọkọ igwe.Ọ bụrụ na ị bụ ụlọ ọrụ na-ere ahịa nke mba ọzọ ma na-achọ ndị na-ebupụta ihe nchara nchara, ọkpọkọ ígwè na ihe mkpuchi ígwè na China, biko kpọtụrụ anyị.Iji nye gị ngwaahịa ndị ọkachamara na ndị dị elu na China iji mee ka azụmahịa gị ka mma na mma!
Ụlọ ọrụ anyị nwereọtụtụahịrị mmepụta ngwaahịa igwe zuru oke naUsoro nyocha ngwaahịa kacha sie ike iji hụ na ọnụego ngafe ngwaahịa 100%.;kacha usoro nnyefe ngwa ngwa zuru oke, ya na onye na-ebu ibu nke ya.na-azọpụta gị karịa ụgwọ njem na-ekwe nkwa 100% nke ngwaahịa.nkwakọ ngwaahịa zuru oke na mbata. Ọ bụrụ na ị na-achọ ihe kacha mma nchara efere, eriri igwe, ígwè ọkpọkọ emeputa na China, ma na-achọ ịzọpụta ọzọ lọjistik ibu, biko kpọtụrụ anyị, anyị ọkachamara multilingual ahịa otu na lọjistik otu ụgbọ njem ga-enye gị kacha mma Steel ngwaahịa ọrụ. iji hụ na ị nwetara ngwaahịa 100% ejiri n'aka!
Nke gara aga: Nkenke alloy ígwè anwụrụ
Osote: Igwe mkpuchi igwe anaghị agba nchara
Nkenke igwe anaghị agba nchara tube nchara
astm A106 obere carbon ígwè ọkpọkọ
Ọkụ hydraulic cylinder Pipe High Precision Burnishe...
Ọkụ Structural Carbon Stee enweghị nkebi
© Nwebiisinka 20022022: Ikike niile echekwabara. Galvanized Steel Pipe Ppgi Coil Ppgi Steel Coils Corrugated Metal Panels Colorful Steel Coil Galvanized Corrugated Sheet Color Coated Coil Ppgi Steel Coil Ppgl Coil Color Coated Steel Roll Colored Coil >